Mgbe Psychopaths na-aga Ọrụ | Martech Zone
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 6, 2006 Friday, April 23, 2021 Douglas Karr
Ọtụtụ n'ime ezigbo ndị enyi m na ndị ọrụ ibe m maara na enwere m ahụmahụ dị oke egwu ịhapụ onye ọrụ m n'oge gara aga. Fọdụ ndị nwere ike ịjụ ihe kpatara ndị folks enweghị ike ịga n'ihu na ụdị ihe dị otu a. Mgbe onye were gị n'ọrụ bụ nnukwu nzukọ ọ na-echekarị ịbịaghachi wee chetara gị. Ọ gwụla ma ị hapụrụ obodo ahụ, ị ​​ga-anọgide na-anụ 'okwu n'okporo ámá' banyere ihe mere mgbe ị hapụrụ. Thehapụ ụlọ ọrụ abụghị nhọrọ - nke a bụ ihe m na-eme maka ndụ.
Mgbe ị bụ ụdị onye anaghị ekewapụ ọrụ n'ụlọ ma wụsa ihe niile ị nwere n'ọrụ gị - ọnọdụ dị ka nke a siri ike ịhapụ. Maka anyị ndị hapụrụ, anyị niile ekwenyela n'ihe mere. Mana ụfọdụ ndị folks ahụ hapụrụ nwere ọnya miri emi nke na ha enweghị ike ịnagide ịga nri ehihie ma soro ndị ọzọ kwurịta okwu. Cheedị echiche ọnọdụ dị egwu ọ ga-abụ imebiri mmadụ ụdị ihe ahụ.
Abụ m ezigbo mmadụ obi ụtọ. Ahụrụ m ọrụ m n'anya ma hụ ihe m na-eme n'anya. Ma mgbe m chetara oge ahụ na ọrụ m, enweghị m ike ịjụ ma ihe mere onye kpatara ya ji nọrọ ebe ahụ ma na-emebi. Ọtụtụ ndị mmadụ agaala, ngalaba ndị ritere ihe nrita tupu nsogbu adị ugbu a, ọrụ ụlọ ọrụ a na-ebelata n'ihi ya. Ma person onye kpatara ya ka dị. Nke a bụ n'ezie ihe omimi nye m.
Enwetara m akwụkwọ na ala ụnyaahụ: Agwọ na Suut, Mgbe Psychopaths na-aga Ọrụ. Agụrụ m okwu mbido ahụ ka m na-eche ndị enyi m wee kpebie ịzụta akwụkwọ ahụ. N'ezie, ọ bụ n'ihi ịmata ihe karịa ịnwa ịkọwa ihe mere m. Anaghị m etinye ọnụ na abụọ ọnụ. Ma mgbe ahụ, m na-agụ nke a:
N'ezie, ọ bụghị mmadụ niile nwere mmasị na Helen, ụfọdụ ndị ọrụ ya atụkwasịghịkwa ya obi. O mesoro ndị obere ọrụ ibe ya ihe nleda anya na nlelị, na-eleda ikike ha na iru eru ha anya. Nye ndị ọ hụrụ na ọ bara uru n'ọrụ ya, ọ na-eme amara, na-ekere òkè ma na-ekpori ndụ. O nwere onyinye maka igosi ezi ihe ya nye ndi o chere na ihe metutara, oge niile na-agọnarị, na-ewedata ego, na-atụfu ma na-achụpụ onye ọbụla na-ekwenyeghị na mkpebi ya.
Helen mepụtara aha ọma maka ịgwa ndị ọrụ ụlọ ọrụ ihe ha chọrọ ịnụ, ijikwa nzukọ na-achịkwa usoro dị ka a ga-asị na ha bụ mmemme Hollywood. O kwusiri ike na akụkọ ya na-agbaso ederede ederede ahụ, na-enyefe ya ajụjụ ọ bụla na-atụghị anya ya ma ọ bụ nke siri ike. Dị ka ndị ọgbọ ya si kwuo, Helen bụ aka ochie n'ichepụta echiche, ọ na-ejikwa ọga ya nke ọma, na-amaja akụkọ ndị a na-akọ, ma na-eme omume ndị dị mkpa nye ya. ”
Ogwu ogugu abuo a n’eziputara m ihe ojoo. Eji m n’aka na akwụkwọ a ga-enyere m aka ịgbaghara ma chefuo ihe mere m na ọtụtụ ndị ezigbo mmadụ, mana ikekwe ọ ga-enyere m aka ịghọta ya nke ọma. Anaghị m anụ ndị isi na nzukọ na ụlọ ọrụ ahụ bụbu ndị ọrụ ibe m a kwanyere ùgwù - nke megidere nke ahụ, anaghị ekwe ka m kpọtụrụ ha.
Ikekwe ha nwere ike iwere akwụkwọ a, gụọ ya, ma tinye abụọ na abụọ ọnụ. O doro anya na ha ga-abịarute otu nghọta m na-abịa ugbu a.
Ha nwere ike na-arụ ọrụ na psycopath.
Nye Iwu Agwọ Na Suut On Amazon
Tags: akparamaagwaakparamaagwaagwọ na suut
Nkezi afọ iri na ụma
Halllọ Nzukọ Daniel
Nov 21, 2008 na 2:45 AM
Mmasị na-akpali mmasị, enwere m ekele na enwebeghị m ihe ọjọọ ọ bụla dakwasịrị m!
Yougụtụla banyere echiche nke "nkwekọ wuru" ..
Na ụfọdụ ụlọ ọrụ nsogbu na-adịghị chere ihu anyị na-enwe n'ihi na anyị nwere, na-akpata a jikọrọ ọnụ. Yabụ na ịkparịta ụka n youetiti ọha na eze, ị gaghịdị agwa otu onye okwu ma ị manye ya n'ọrụ. Iche echiche n’olu dara ụda kama ịzọpịa ya ogologo oge nwere ike ibute nsogbu anụ ahụ.
Nov 23, 2008 na 11:28 AM
Dịka onye ọzọ enwere ọpụpụ dị egwu, enwere m ọmịiko maka ọnọdụ Doug, enwere m ike ịghọta maka ogologo oge ọ ga-ewe iji gwọọ ya. Mụ onwe m ka nọkwa na-agba asịrị banyere ihe mere kemgbe m hapụrụ, ọ bụ ezie na ncheta ahụ adịkwaghị agbapụta, agaghị m akwụsị kpamkpam mmebi ahụ mebiri m (maka ndị na-ahụbeghị ya, ị nwere ihu ọma-ịbụ onye e merụrụ rụọ ọrụ oghere, ma ọ bụ ịtụkwasị ndị ọrụ ibe gị obi ma ọ bụ ndị nọ n'ọkwá dị elu, ọ dị gị ka edina gị n'ike, zuo ohi, pịa gị ihe ma hapụ gị nwụrụ anwụ). Otu ụzọ ị ga-esi mee bụ ikwu “ọnwụ ha” na “emere m ebere.” Echere m na "ndị jerks mere ka ndụ m sie ike nnagide n'afọ ndị ahụ niile ga-enwerịrị ụfọdụ ntụkwasị obi nke onwe ha iji gbalịsie ike na-eme ka ndị na-atụnye ụtụ dị mma na hel dị otú a." Echiche ndị a niile enyerela m aka ịgwọ-ikekwe ha ga-enyere gị aka, kwa, Doug.